fps Low kwi ekupheleni pc phezulu
umbuzo fps Low kwi ekupheleni pc phezulu
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #621 by JanneAir15
Molo! I nje kwakhiwa kutshanje entsha computer kwaye efakiweyo FSX. Ukuba addons ngaphantsi kanye ngoku (in ikhompyutha endala kwakukho addons ezininzi freeware) kodwa Ndiyamangala ukuba kutheni fps yam ezantsi ukuze nkqu imigama elungileyo icomputer (ngeenxa 20fps). Ingaba ungandinceda?
Kakade ke, specs ye computer
CPU: AMD Ryzen 1700X (hayi overclocked)
RAM: G Ubuchule Ripjaws V Series 16GB DDR4 3200MHz
Ndicinga kukho ibaluleke kakhulu ukwazi kodwa undibuze ukuba andizange ukugubungela into.
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-8 inyanga edlulileyo JanneAir15.
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #623 by Gh0stRider203
Kukho izinto ezimbalwa onokuzenza. Isiza #1 ndisebenzisa ukuyisebenzisa, okubuhlungu kukuba akusekho macala
Into yokuqala Ndingathanda ukwenza, ngokunyanisekileyo, kuba indawo le fayile UIAutomationCore.dll. Andazi nokuba ukukhumbula apho ndafumana My replacement ifayile ukusuka.
Oku kunokukunceda: steamcommunity.com/app/314160/discussions/0/530646080866079080/
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #624 by JanneAir15
Ndibe sele ndiyi-UIAutomationCore. Dll kodwa ndingazama loo nto kwiforamu yeSeram. Enkosi. Ngendlela ndiyichitshile i-fsx.cfg kuba ndiyifake i-tweaked kodwa ngoku ndibeka nje i-tweaks kwaye sele ibhetele ngakumbi ngoku.
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #625 by JanneAir15
Yilungile! Ndandifumana ibhalansi elungileyo phakathi kwee-sliders kunye nokuba ndibeke ezinye i-sliders phantsi kwakhona kubonakala kungcono kunezicwangciso engaphambili. Iyahlekisa lonto
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #629 by Gh0stRider203
Soloko uthanda ukuphela kokuvuya!
Ixesha ukwenza page: 0.350 imizuzwana